Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! यसरी गरियो अमेरिकामा 'तो तै ङोल्स्यो' गीतको छायांकन [तस्बिरहरु]
यसरी गरियो अमेरिकामा 'तो तै ङोल्स्यो' गीतको छायांकन [तस्बिरहरु]
ग्लोबल संवाददाता बिहीबार, भदौ १०, २०७८
न्युयोर्क । अमेरिकी निवासी रुथमान गुरुङको पहिलो प्रस्तुति "तो तै ङोल्स्यो" अफिसियल गीतको छायांकन अगस्ट २४ तारिखमा सम्पन्न भएको छ ।
अमेरिकाकै विभिन्न रमणीय स्थानहरु क्रमश: वेल माउन्टेन, जोर्जिया र न्युयोर्कमा छायांकन गरिएको हो । छायांकनमा गीतमा शम्भु मोक्तान, प्रेम गुरुङ र कुल थापाले साथ दिनुभएको थियो ।
गुरुङ फिल्मको चर्चित नायिका मिरा गुरुङको निर्देशनमा रहेको गीतमा रुथमान गुरुङ र गुरुङ फिल्मकै नायिका एन्सर्ज गुरुङको बेजोड अभिनय रहेको छ । अडियो गीतको भिडियो भने साउन १५ गते नै यजम्रो इन्टरटेन्मेटको युटुब च्यानलबाट सार्वजनिक भइसकेको छ । गीतमा कमलबहादुर गुरुङको शब्द, केशबहादुर गुरुङको संगीत, पबित्रा गुरुङको स्वर र धनबहादुर गुरुङको एरेन्ज तथा स्वर रहेको छ ।
अफिसियल गीतलाई पनि छिट्टै दर्शकसामु ल्याउने तयारी रहेको निर्माण टिमले जनाएको छ ।
मानिसहरु घरमै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा, कलाकार तथा नवप्रतिभाहरुको कला प्रस्फुटन र उजागर हेतु सोही गीतमा टिकटक प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिएको छ । बिजयी प्रतियोगीले प्रथम, द्वितीय र तृतीय क्रमशः नगद रु २०,००० , १५,००० र १०,००० पाउने छन् । प्रतियोगीतासम्बन्धी यजम्रो इन्टरटेन्मेट फेसबुक पेजमा हेर्न अनुरोध गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १०, २०७८, १९:२२:००
शुक्रबार, साउन १५, २०७८ कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी : टिचिङ अस्पतालमा खोइ सुरक्षा मापदण्ड ? [तस्बिरहरु]
बिहीबार, साउन ७, २०७८ ९ तस्बिरमा हेर्नुहोस्, नुवाकोटको गुर्जे-छहरे सडक निर्माण
बुधबार, असार ३०, २०७८ सकिनै लाग्यो पञ्‍चकन्याको लेकाली भेगमा रोपाइँ [तस्बिरहरु]